यस्ता बालबच्चामा हुन्छ कब्जियतको जोखिम – Karnalisandesh
यस्ता बालबच्चामा हुन्छ कब्जियतको जोखिम
प्रकाशित मितिः १३ माघ २०७७, मंगलवार २०:४६ January 26, 2021
काठमाडौँ। खानपान नमिल्दा वा फाइबरयुक्त खानेकुराको कमीले बच्चामा कब्जियतको समस्या देखापर्छ। अक्सर बच्चाहरु नियमित शौच गर्दैैनन् । वा त्यस्ता काममा अभिभावकले अभ्यस्त गराउँदैन । यसले पनि उनीहरुको पेट सफा हुँदैन, जो कब्जियत बन्न सक्छ।
पानी, रेशादार फलफुल तथा सागसब्जीको अपुगका कारण पनि बालबालिकालाई कब्जियत हुने गर्दछ। कब्जियत हुदाँ ठूलो आन्द्रामा जमेर बसेको फोहर ढिलो गरी बाहिर निस्कने गर्छ।
जब ठूलो आन्द्राले राम्ररी काम गर्न सक्दैन र आन्द्रामा टासिएर बसेको फोहरलाई मलद्धारबाट बाहिर फाल्न सक्दैन। यहि अवस्थामा कब्जियत हुने गर्छ। कब्जियत भएमा बालबालिकामा विभिन्न लक्षण देखा पर्ने गर्छ।
– हप्तामा तीन पटक भन्दा कम पटक दिशा हुने
(कडा दिशा, सुख्खा दिशा तथा दिशा गर्नमा समस्या भएमा
(मोटो तथा बाक्लो दिशा भएमा
(रगत सहितको कडा दिशा भएमा
(बच्चाको भित्री वस्त्रमा माटो जस्तो दिशा देखिएमा
कब्जियत हुनुको कारण
सामान्यतया आन्द्रामा भएको फोहर बाहिर निस्कन नसकेका वा कम गतिमा पास भएमा कब्जियत हुने गर्दछ । कब्जियत भएमा दिसा सा¥हो वा कडा हुने गर्दछ । कब्जियत हुने धेरै कारण हुन्छन् ।
लामो समय दिसा रोकेमा
बालबालिका खेल्न भनेपछि हुरुक्कै हुने गर्दछन् । यतिसम्म की उनीहरु दिसा पिसाब आएको पनि थाहा पाउदैनन् र आए पनि शौचालय जान रुचाउँदैनन् । बरु रोकेरै राख्छन् । जसका कारण उनीहरुमा कब्जियतको समस्या हुन्छ ।
फाइबरयुक्त खानेकुराको कमी, पर्याप्त मात्रामा पानी सेवन नगर्नु, झोलिलो पदार्थ सवन नगर्नाले पनि बालबालिकामा कब्जियतको समस्या निम्तने गर्दछ ।
बालबालिकाको दिनचर्यामा आउने परिवर्तनका कारण पनि उनीहरुमा कब्जियतको समस्या हुने गर्दछ । विशेषगरी, लामो छुुट्टीमा जाँदा, तनाव हुदाँ वा तापक्रममा आउने परिवर्तनका कारण पनि उनीहरुको दिनचर्या तथा खानपानमा बदलाव आउने गर्छ । र, बालबालिकामा कब्जियतको समस्या रहने गर्छ ।
औषधिको सेवनका कारण पनि बालबालिकामा कब्जियत हुने गर्दछ ।
परिवारमा कब्जियतको समस्या भएमा पनि बालबालिकालाई कब्जियष्तको समस्या हुने गर्दछ । यसको प्रमुख कारण वंशाणुगत वा एउटै परिवेश पनि हुनसक्छ।
गाईको दूधको सेवन
गाईको दूधको एलर्जी भएमा वा अत्याधिक मात्रामा दूधबाट बनेको परिकारको सेवन गरेमा पनि बालबालिकामा कब्जियतको समस्या निम्तने गर्दछ ।
पेटको समस्या भएमा
बलबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएमा, पेटको समस्या भएमा , खाना नपचेमा वा खानाका एलर्जी भएमा पनि कब्जियत हुने गर्दछ।
के छ त उपचार ?
बालबालिकामा हुने कब्जियतको समस्या कम गर्न यी उपाय अपनाउन सकिन्छ।
फाइबरयुक्त खानेकुराको सेवन
बालबालिकामा कब्जियतका समस्या भएमा फलफुल, तरकारी, गेडागुडी, सिङ्गो अन्न लगायतका हाई फाइबरयुक्त तथा रेशेदार खानेकुरा ख्वाउनु पर्छ। यदी बच्चाले फाइबरयुत्त खानेकुरा आफै खानसक्दैन भने लिटो बनाएर तथा केही ग्राम फाइबरयुक्त खानेकुरा उनीहरुको खानामा मिसाएर पनि ख्वाउन सकिन्छ।
प्रशस्त मात्रामा झोलिलो पदार्थको सेवन
कयौ बालबालिकामा पानीको कमीका कारण पनि कब्जियतको समस्या निम्तने गर्छ । त्यसैले, कब्जियत नहोस् भन्न तथा आन्द्रामा जमेर बसेको फोहरलाई सजिलै बाहिर निकाल्नको लागि पनि प्रशस्त मात्रामा झोलिलो पदार्थको सेवन जरुरी छ ।
दिसा पिसाब गराउने बानी
नियमित रुपमा दिसा पिसाबका लागि अभ्यस्त गराउने । निश्चित समयमा प्रत्येक दिन शौचालय जाने बानी बस्नाले उनीहरुमा कब्जियतको समस्या रहदैन । पेट सफा हुन्छ ।
बाथरुम जानको आवश्यकताबारे जानकारी दिने
बालबालिकालाई प्रायः खेल्न पाएपछि अरु केही चाहिदैन । यतिसम्म की बाथरुम जान समेत उनीहरु आवश्यक ठान्दैन । त्यसैले, बालबालिकालाई बाथरुम जानुको आवश्यक्ताबारे जानकारी दिउ । बाथरुम जाने गर्नाले शरीरमा के के फाइदा पुग्छ, त्यसबारे बताउनुपर्छ ।
बालबालिकाले प्रयोग गर्ने विभिन्न औषधीको सेवनका कारण पनि उनीहरुमा कब्जियतको समस्या निम्तने गर्दछ । यति औषधीको कारण बालबालिकामा कब्जियतको समस्या निम्तिएको छ भने चिकित्सकको परामर्श आवश्यक छ ।
कस्ता बालबालिकामा कब्जियतकाे जोखिम धेरै हुन्छ?
–जो विलासी जीवन बताउँछन् ।
–पर्याप्त मात्रामा फाइबरयुक्त खानेकुराको सेवन गर्दैनन् ।
–प्रशस्त मात्रामा पानी तथा झोलिलो पदार्थको सेवन गर्दैनन्
–जसलाई पेट तथा मलद्धार सम्बिन्ध समस्या छ
–जसको परिवारका कुनै सदस्यलाई कब्जियतको समस्या छ